Football Khabar » किन बस्यो बार्सिलोनाका सिनियर खेलाडीको ‘आकस्मिक बैठक’ ?
किन बस्यो बार्सिलोनाका सिनियर खेलाडीको ‘आकस्मिक बैठक’ ?
स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको उपाधि भिडन्तमा भ्यालेन्सियासँग हारेपछि बार्सिलोनाको टिममा अर्को हलचल पैदा भएको छ । युरोपियन च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएको बार्सिलोना तीन साताको बीचमा कोपाबाट पनि आउट भयो ।
गत राति उपाधि भिडन्तमा बार्सिलोनालाई भ्यलोन्सियाले २–१ ले स्तब्ध बनाउँदै उपाधि जित्यो । बार्सिलोनाका लागि २–० ले पछि परेका बेला कप्तान मेस्सीले दोस्रो हाफमा १ गोल गरे पनि उनको गोलको कुनै अर्थ रहेन ।
लगातार दुई प्रतियोगितामा असफलता भोगेपछि बार्सिलोनाका खेलाडीले अघिल्लो दिन ‘आकस्मिक बैठक’ बसको खबर छ । ‘एस’का अनुसार भ्यालेन्सियाँगको हारपछि क्याम्प नोउ फर्किएपछि आइतबार कप्तान मेस्सीले खेलाडीसँग बैठक गरेका हुन् ।
खेलाडीको बैठकमा मेस्सीले टिमका सिनियर खेलाडीलाई मात्रै सामेल गराएका थिए । खबरअनुसार मेस्सीसँगै लुइस स्वारेज, जेरार्ड पिके, सर्जियो बुस्केटुसलगायत खेलाडी सहभागी थिए ।
बैठकमा मेस्सीसहितका खेलाडीले कोपामा भोगको हारको विषयमा छलफल गरेका थिए । उनीहरूले खेलाडी र प्रशिक्षकको सम्भावित भविष्य र आलोचनालाई ध्यानमा राखेर छलफल गरेको बताइएको छ ।
सो समाचारअनुसार खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकमा जानुअघि नै बार्सिलोनाको बोर्डले कप्तान मेस्सीसहित सिनियर खेलाडीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । सोही छलफलका लागि खेलाडीले पहिला तयारीस्वरूप छलफल गरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १५:३३